Anycall Mobile | Page4of 11 | Explore Everything with Us !
Foldable ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ မျက်ခုံးလှုပ်စရာ မှန်လဲစျေးနှုန်းတွေ ﻿
Pyae Sone Hein Htet,7months ago 1 min read
ကောလဟလတွေနဲ့ ခန့်မှန်းမှန်းချက်တွေထွက်လာပြီး နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ Foldable Smartphones တွေဟာ 2019 မှာစတင်ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Foldable Displays တွေဟာ Cutting-Edge နည်းပညာကိုသုံးထားတဲ့အတွက် စျေးကလဲကြီးပါတယ်။ အဲ့အတွက် Foldable ဖုန်းတစ်လုံးမှာ မှန်တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် ကုန်ကျလာနိုင်တဲ့မှန်စျေးနှုန်း တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Samsung Galaxy Fold ပထမဆုံး Foldable ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Galaxy Fold ဟာ အစက April လမှာထွက်လာဖို့ရှိခဲ့သော်လည်း အခက်အခဲအနည်းငယ်ကြောင့် September လမှသာထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခု ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဝန်ကျင်ရှိတဲ့ Galaxy Flod ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် စျေးကွက်တစ်ချို့မှာရောက်နေပါပြီ။ US…
Huawei Mate X Model အသစ်မှာ 65W Fast Charging ထောက်ပံ့ပေးလာမယ်
Foldable ဖုန်းတွေဟာ အခုနှစ်တွေမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ရလာနေတဲ့အတွက် စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ သူတိုရဲ့ကိုယ်ပိုင် Foldable ဖုန်းတွေပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေကြပါပြီ။ Huawei အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Huawei Mate X နဲ့အတူ Foldable ဖုန်း လောကထဲကို ပွဲထွက်လာခဲံပါတယ်။ US Ban ကြောင့်ဖုန်းဟာ တရုတ်စျေးကွက်မှာသာ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက် Foldable ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Motorola Razr ၊ Galaxy Fold တို့နဲ့ယှဉ်ရင် Huawei Mate X ဟာ မတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ​ခေါက်ဖုန်းပုံစံ Razer နဲ့ Notebook ပုံစံ Galaxy…
ကျစ်လစ်တဲ့ Body ၊ 90Hz Screen နဲ့ Quad-Cameras ပါဝင်တဲ့ OPPO Reno3 5G နဲ့ Reno3 Pro 5G တို့တရားဝင်ထွက်ရှိလာ
Pyae Sone Hein Htet,7months ago3min read
OPPO ကတော့ OPPO Reno3 5G နဲ့ Reno3 Pro 5G စတဲ့ သူတို့ရဲ့ 5G ဖုန်းအသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ Reno3Series ဟာ အရင်လအနည်းငယ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ Reno2Series နေရာမှာ အစားထိုးလာမှာပါ။ Reno3Series မှာ 5G ၊ Fast Charging ပါပြီး များတဲ့ပမာဏရှိတဲ့ Battery နဲ့ Quad-camera Setup ပါ၀င်လာပါတယ်။ ချုံပြောရရင် ဖုန်းဟာ ပါးပြီး အလေးချိန်ပေါ့တဲ့ Body ရှိပါတယ်။…
မြန်မာကျပ်ငွေ လေးသိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Huawei Nova6SE ကို တရုတ်ပြည်တွင်စတင်ရောင်းချ
RKhar Min Thant,7months ago2min read
Huawei က အခုလအစောပိုင်းမှာ Flagship ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Nova6ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ Mid-Range စျေးကွက်အတွက်လဲ Nova6SE ဆိုပြီး SE version ကိုလဲ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ထိုမိတ်ဆက်ပွဲကပြောကြားချက်တွေအရ Nova 6SE ကို ပွဲပြီးပြီးချင်းမှာတင် pre-order လုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီးတော့ ထိုဖုန်းကို တရုတ်စျေးကွက်ထဲမှာ စတင်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ 2,199 ယွမ်(314 ဒေါ်လာ) ခန့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pre-Order တင်ထားတဲ့ customer တွေကတော့ 2,149 ယွမ်နဲ့ဝယ်ယူရရှိမှာဖြစ်ပြီး 50 ယွမ်…
၂၀၂၀ ပထမသုံးလအတွင်းမှာ ထွက်ရှိလာမယ့် MediaTek Dimensity 800 Chipset ကို Mid-Range ဖုန်းတွေအတွက်မိတ်ဆက်
ဒီနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ MediaTek ရဲ့ Product Communication အစည်းအဝေးမှာ MediaTek နေနဲ့ MediaTek Dimensity 800 လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ Chipset အသစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို Processor အသစ်ဟာ Mid-range နဲ့ Upper Mid-Range ဖုန်းတွေမှာ နေရာယူလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ MediaTek Dimensity 800 Processor ဟာ စျေးကွက်ထဲကို ၂၀၂၀ လဝက်လောက်မှာ ရောက်ရှိလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Chipset နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထွက်ရှိလာမယ့်ရက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော်လည်း Chipset ရဲ့ Specifications နဲ့ Features…
Nyein Aung Htet,7months ago2min read
Redmi K20 နဲ့ K20 Pro တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဦးမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ Redmi K30 နဲ့ K30 Pro ကို မကြာခင် မိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျဆိုရင်တော့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်းမှာ Redmi က အဲ့ဒီဖုန်းတွေရဲ့ အချက်အလက်တစ်ချို့နဲ့ ပိုစတာတွေကို ထုတ်ပြနေပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း အဲ့ဒီဖုန်းတွေရဲ့ အကြောင်းတွေ Leaks ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုလက်ရှိ သိထားရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ 4G နဲ့ 5G ဆိုပြီး Version နှစ်မျိုးနဲ့ ထွက်ရှိမယ့် Redmi…
Nyein Aung Htet, 8 months ago 1 min read
VoLTE, VoLTE ဆိုပြီး လူတွေပြောနေကြတာကို ကြားဖူးကြမှာပါ ဒါမှဟုတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Operator တွေဖြစ်တဲ့ Telenor တို့ Mytel တို့ရဲ့ Messages တွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို မြင်ကြတွေ့ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ…။ VoLTE ဆိုတာ ဘာလဲ…? သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ရှင်းမပြခင် သူ့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အရင်ဆုံး ရှင်းပြပါ့မယ်။ VoLTE ဆိုတာက Voice Over LTE ကို အတိုကောက် ခေါ်တာပါ။ အပြည့်အစုံကတော့ Voice over Long-Term Evolution ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ…
Nyein Aung Htet, 8 months ago02 min read
တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် မရိုးနိုင်အောင် ထွက်လာနေတဲ့ နည်းပညာမြင့်၊ ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ဖုန်းတွေ အကြောင်းကို Hype ကြရင်း၊ ငေးမော အားကျရင်း၊ လူအများစုတတ်နိုင်တဲ့ Budget ဖုန်းလေးတွေကိုမေ့လျော့နေကြပါတယ်။ iPhone 11 Pro ရဲ့ Camera က ဘယ်လို၊ Xiaomi MI MIX Alpha က ဘယ်ပုံ၊ Mate 30 Pro ကြီးက အကြမ်းကြီး၊ Mi CC9 Pro ကလည်း တန်လိုက်တာ၊ OnePlus 7T ကလည်း မြန်လိုက်တာ၊ ROG Phone II က…
Xiaomi နဲ့ Redmi နဲ့ ဖုန်းတွေမှာ China အလုံး နဲ့ Global အလုံး ဆိုပြီး နှစ်ခု ကွဲပြားနေတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ လူတော်တော်များများ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကျွန်တော်တို့ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ (***တကယ်လို့ မဖတ်ရှု့ရသေးဘူးဆိုရင် http://bit.ly/2K8jdNR အဲ့ဒီ လင့်ကလေးကို နှိပ်လို့ သွားရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်***) China နဲ့ Global နှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေကို သိသွားပြန်တော့ နောက်ထပ် မေးစရာတွေ ရှိလာပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Xiaomi နဲ့ Redmi ဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်… Global ဝယ်ရမလား? China…
ဒီနေ့ခေတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ပုံမှန် ကင်မရာ ၁လုံးကနေ Ultra-wide angles, Telephoto, Depths နဲ့ Macro ဆိုပြီး ကင်မရာ ၂လုံး၊ ၃လုံး၊ ၄လုံးကနေ နောက်ဆုံး ၅လုံး အထိ ပါဝင်နေပါပြီ! ဒီလို ကင်မရာတွေ အများကြီးပါဝင်လာတာကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို မတူညီတဲ့ ရှု့ထောင့် အသစ်တွေ ကနေ အမြင်ဆန်းတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးစေဖို့ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကဲ ဒီနေ့တော့ အဲ့ဒီ ခပ်ရှုပ်ရှုပ် ကင်မရာဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေကို နားလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်…။ (*နည်းပညာဆိုင်ရာ စကားလုံးတွေကို တက်နိုင်သလောက် လျော့သွားမှာဖြစ်သလို…
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာ အကြီးအကျယ် Tease လုပ်ပြခဲ့တဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi CC9 Pro ကို ဒီကနေ့ တရားဝင် မိတ်ဆက်သွားပါပြီ။ တရားဝင် မိတ်ဆက်သွားတဲ့ Mi CC9 Pro အကြောင်လေးတွေကို ပြန်ပြီးတော့ ဖောက်သည်ချရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်… ကင်မရာ အားလုံးပေါင်း ၅လုံးအထိ ပါဝင်ပြီး ၅ လုံးပြူး Penta Camera Setup ထဲမှာ… 108MP Main 12MP Depths 20MP Ultrawide 5MP Telephoto 2MP Macro တို့ အသီးသီးပါဝင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Camera Setup…
Xiaomi နဲ့ Redmi နဲ့ ဖုန်းတွေမှာ China အလုံး နဲ့ Global အလုံး ဆိုပြီး နှစ်ခု ကွဲပြားနေတာကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများက အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေကို အခုထိ သေသေချာချာ မသိတဲ့ အပြင် အဲ့ဒီနှစ်ခုကို ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။ ကဲ…ရှုပ်ထွေးနေတာလေးကို ရှင်းကြရအောင်လားဗျာ…။ Xiaomi နဲ့ Redmi ကို အရင်ဆုံးရှင်းပါ့မယ့်။ အရင်က Redmi ဟာ Xiaomi ရဲ့ ဖုန်း Series တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ အရောက်မှာတော့ Redmi ကို Xiaomi…
လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၅ရက်မှာ တရားဝင် မိတ်ဆက်မယ့် Mi CC9 Pro ရဲ့ အကြောင်းတွေကို Xiaomi က Tease လုပ် ချပြနေတာ တော်တော်လေးများနေပါပြီ။ Mi CC9 Pro ရဲ့ အကြောင်းတွေထဲက ကျွန်တော်တို့ မသိရသေးတာဆိုလို့ သူ့ရဲ့ ဈေးနှုန်းပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကဲ… အခုလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို Xiaomi က Tease လုပ်လိုက်တာမို့ ထပ်မံမျှဝေပေးပါရစေ… ။ Mi CC Series ဖုန်းတွေဟာ Mid-range ဖြစ်တာကြောင့် Mid-range Chipset…
လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၅ရက် နေ့မှာ တရားဝင် မိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်တဲ့ Mi CC9 Pro ရဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို သိရှိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အခုလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်လေး‌ေတွ ထွက်ရှိလာလို့ ထပ်မံမျှဝေပေးပါရစေ… ။ Xiaomi က Tease လုပ်ထားတဲ့ Posters တွေအရ Mi CC9 Pro မှာ 5260mAh Battery ပါဝင်မှာပါတဲ့။ သင်ဖတ်လိုက်တာ မမှားပါဘူးနော်။ 5260 mAh Battery ပါ။ တကယ့် Heavy ကြီးပါပဲ။ (Weight ကလည်း…